Edit 'translate/choose-team/01.md' using 'tc-create-app' · c012a8155a - DMS_GL_en_ta - Wycliffe Associates Content Service
Edit 'translate/choose-team/01.md' using 'tc-create-app'
ZweMyatKaung6months ago
1 changed files with 32 additions and 47 deletions
translate/choose-team/01.md View File
### Importance ofaTranslation Team
### ဘာသာပြန်အဖွဲ့၏ အရေးပါမှု
Translating the Bible isavery large and difficult task that may take many people to
accomplish. This module will discuss the skills that will be needed by members of the
Bible translation team, and the responsibilities that these people will have. Some
people will have many skills and responsibilities, and other people will have onlyafew.
But it is important that every Bible translation team includes enough people to make
sure that all of these skills are represented on the team.
သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည် အလွန်ကြီးမားပြီး အလွန်ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြီးမြောက်ရန်အတွက် လူပေါင်းများစွာပါ၀င်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအခန်းတွင် ကျမ်းစာအားဘာသာပြန်မည့် အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက် ရှိရန်လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများနှင့် ထိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်း၏ တာ၀န်ယူမှုများကို ဖော်ပြဆွေးနွေးသွားပါမည်။ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ အရည်အချင်းများနှင့် တာ၀န်ခံမှုများစွာရှိရန်လိုအပ်ပြီး အချို့သည် အနည်းငယ်သာရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ကျမ်းစာသာသာပြန်မည့် အဖွဲ့တွင်ပါ၀င်မည့် လူတိုင်းသည် အဖွဲ့အတွက် လိုအပ်မည့် အရည်အချင်းတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
#### Church Leaders
Before startingatranslation project, as many church networks as possible should be
contacted and encouraged to becomeapart of the translation and even to send some
of their people to beapart of the translation team. They should be consulted and
asked for their input into the translation project, its goals, and its process.
ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းလုပ်ငန်းစဥ် မစသေးသော အချိန်တွင် များနိုင်သမျှများသော ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့အစည်း ကွန်ယက်များနှင့် ချိတ်စက်ပူးပေါင်းကာ ၎င်းတို့ကို ဘာသာပြန်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန် အားပေးလှုံ့ဆော်ပြီး လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့ဆီမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ကိုပါ ဘာသာပြန်အဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ်ပါ၀င် ဖွဲ့စည်းစေရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းစဥ်၊ ရည်ရွယ်ချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းစဥ်များကို ၎င်းတို့နှင့် အတူဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
In most successful projects,astrategic leader (or team of leaders) withadesire to
serve and equip the church that speaks the language isacatalyzing and motivating
force to unite the churches, inaugurate the project, and move the project forward.
These leaders are often the drivers that form the translation committee and help to
oversee from the beginning the efforts of the larger translation effort and its integration
into the formation and growth of the church in the people group.
အအောင်မြင်ဆုံးသော ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းများတွင် ဗျူဟာချသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များသည် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရန် စိတ်ဆန္ဒနှင့် အခြားဘုရားကျောင်းများအား စုစည်းနိုင်စွမ်းနှင့် လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ဘုရားကျောင်းတော်များကို အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဥ်ကို ရှေ့သို့ရောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဘာသာပြန်အဖွဲ့အစည်းအား ဦးဆောင်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြပြီး အဦးပိုင်း ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဘာသာပြန်ဆိုမှု၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွတ်မူများကို ကြည့်ရူနိုင်ကြကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဘုရားကျောင်း၏ ကြီးထွားရှင်သန်မှုနှင့် အခြေခံအုတ်မြစ် တည်ဆောက်မှုတို့တွင် ပါ၀င်နေကြပါသည်။
#### Translation Committee
#### ဘာသာပြန် ကော်မတီ
It is good if the leaders of these churches and church networks can formacommittee to guide the work, choose the translators, resolve problems that arise, and encourage the churches to pray for the work and to support the work financially.
ဘုရားကျောင်းများနှင့် ဘုရားကျောင်းကွန်ယက်များ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူက လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီး ၎င်းအဖွဲ့အစည်းမှ တစ်ဆင့် ဘာသာပြန်သူများအား ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပေါ်ပေါက်လာသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ဘုရားကျောင်းများအား ၎င်းဘာသာပြန်ဆိုမှုအပေါ် အားပေးစေခြင်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအရ ထောက်ပံ့စေခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါက အလွန်ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်သည်။
This committee can also choose the pastors and other leaders who will check the translation at the Accuracy and Validation stages.
၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည် ဘာသာပြန်သောလုပ်ငန်းစဉ်၏ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် အခြားခေါင်းဆောင်များကိုရွေးချယ်နိုင်ကြပါသည်။
When it comes time, committee members can make decisions about the format of the translation and how it will be distributed. They can also encourage the churches to use the translated Scriptures.
အချိန်ကျလာလျှင် ဤကော်မတီမှ ဘာသာပြန်ဆိုရာ၌ လိုအပ်သော ပုံစံများကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပြီး မည်ကဲ့သို့ ဖြန့်ချီမည်ဆိုသည်ကိုလည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားကျောင်းများကိုလည်း ဘာသာပြန်ထားသည့် ကျမ်းစာများကိုလည်း အသုံးပြုရန် လှုံ့ဆော်နိုင်ကြသည်။
This committee should also plan for the maintenance of the translation after it has been translated and distributed. The committee may want to appoint someone to review the comments and suggestions for improvement that will come from the churches that use the translation. Door43 providesaplace for people to access the translation and also to leave these kinds of comments.
၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည် ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းစဥ်ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်တွင် ဘာသာပြန်ဆိုထားမှုများ နှင့် ဖြန့်ချီခဲ့သည့် ဘာသာပြန်ဆိုမှုများအား ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဥ်ချထားသင့်သည်။ အဆိုပါ ဘာသာပြန်အား အသုံးပြုသည့် ဘုရားကျောင်းများမှ မှတ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို ပြန်ကြားဖတ်ရူရန်အတွက်လည်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား တာ၀န်ပေးထားသင့်သည်။ Door 43 သည် ဘာသာပြန်ဆိုမှုကို ရယူနိုင်ရန်နှင့် အထက်ပါကဲ့သို့မှတ်ချက်များထားနိုင်ရန် လူများအတွက် စီစဥ်ပေးထားသော နေရာတစ်ခုဖြစ်လေသည်။
These are the people who will do the work of making the translation drafts. They will be appointed by the Translation Committee. They need to be people who are native speakers of the target language, who can read the source language (the Gateway Language) very well, and who are respected in the community for their Christian character. For more details about these things, see [Translator Qualifications](../qualifications/01.md).
ဘာသာပြန်ဆိုသူများသည် ဘာသာပြန်ထားသောစာမူများရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးရသူများဖြစ်ကြ သည်။ ၎င်းတို့အား ဘာသာပြန်ကော်မတီမှ ခန့်အပ်တာ၀န်ပေးလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပြန်ဆိုမည့်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်ပြောဆိုသူများ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မူလဘာသာစကား(source language) ကိုကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ရူနိုင်သူဖြစ်ရပေမည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည် သူတို့၏ အသိုက်အ၀န်းအတွင်းရှိ ခရစ်ယာန်များကိုလည်း လေးစားသူများ ဖြစ်ရပေမည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသည့် အချက်အလက် များကို (Translator Qualification) (ဘာသာပြန်သူတို့တွင် ရှိသင့်သည့် အရည်အချင်းများ) တွင်တွေ့နိုင်ပေသည်။
Besides making the first drafts, these people will form the core of the translation team that will check each other’s work, check the translation with the language community, and perform the [Translation Words](../../checking/important-term-check/01.md) and [Translation Notes](../../checking/trans-note-check/01.md) checks. After each review or checking session, these translators will be responsible to make the changes to the translation that are necessary so that it communicates what it should in the best way. So they will revise the translation many, many times.
ပထမဆုံးစာမူကြမ်းကို စတင်လုပ်ဆောင်သည့်အချိန်မှစ၍ ဘာသာပြန်ဆိုသူ တို့သည် ဘာသာပြန်အဖွဲ့အစည်း၏ အရင်းအမြစ်များ အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသူများဖြစ်ပြီး တစ်ဦး၏ အလုပ်များအား အခြားတစ်ဦီးမှ အပြန်အလှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘာသာပြန်ဆိုမှုကို ဘာသာစကားအဖွဲ့နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဘာသာပြန်စာလုံးများနှင့် ဘာသာပြန်မှတ်ချက်များအား စစ်ဆေးခြင်းများလုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများနှင့် စစ်ဆေးမှု ကိစ္စရပ်များ အပြီးတွင် ၎င်းဘာသာပြန်သူများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကောင်းဆုံး (သင့်တော်ဆုံးပုံစံ)ရရှိစေရန် လိုအပ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား လုပ်ဆောင်ရန် တာ၀န် ရှိပေသည်။ ထိုအချက်များကြောင့်ပင် ၎င်းဘာသာပြန်သူများသည် ဘာသာပြန်စာမူကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည် ဖတ်ရူ(ဆန်းစစ်) နေရမည်ဖြစ်သည်။
If the translators themselves are not typing the translation draft intoacomputer or tablet, then someone else on the team must do this. This needs to be someone who can type without makingalot of errors. This person also needs to know how to use punctuation marks correctly and consistently. This person may also need to type the revisions and corrections to the translation after each round of checking.
အကယ်၍ဘာသာပြန်သူများကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်စာမူများကို computer သို့မဟုတ် tablet တွင် စာရိုက်မည်မဟုတ်ပါက အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ တခြားတစ်စုံတစ်ဦးက စာရိုက်ခြင်းကို လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစာရိုက်မည့်သူသည်လည်း အမှားအများအပြား မကျူးလွန်ဘဲ စာရိုက်နိုင်သူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်ရပ် သင်္ကေတ အမှတ်အသားများကို မှန်ကန်စွာနှင့် နေရာတကျဖြစ်အောင် သုံးစွဲနိုင်သူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အမှန်ပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း များကိုလည်း စစ်ဆေးမှုအဆင့်တစ်ခုပြီးတိုင်း စာလုံးရိုက်ရန်လည်း လိုအပ်ပေသည်။
#### Translation Testers
Some people need to test the translation with members of the language community to make sure that the translation is clear and sounds natural in the target language. Usually these are the translators, but they could be other people. These testers need to read the translation to people and then ask them questions to see how they are understanding it. Foradescription of this task, see [Other Methods](../../checking/other-methods/01.md).
ပြန်ဆိုမည့် ဘာသာစကားအတွက်ရှင်းလင်းပြီး သဘာ၀ကျစေရန်အတွက် ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဘာသာပြန်ထားရှိသည်များကို စစ်ဆေးရန် လူအချို့လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ဘာသာပြန်ဆိုသူများသာဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် အခြားသူများလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။ ၎င်းစစ်ဆေးသူများသည် ဘာသာပြန်မှုများကို ပြန်ဆိုသူများနှင့် အတူ ဖတ်ရူစစ်ဆေးပြီး ဘာသာပြန်သူတို့ မည်သို့ ပြန်ဆိုခဲ့သနည်းဆိုသည် ကို သိရှိရန် မေးခွန်းများ မေးရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အလုပ်အတွက် ရှင်းလင်းသိရှိရန်အတွက် တစ်ခြားသော နည်းလမ်းများ (Other Methods) ကို ကြည့်ရူပါ။
#### Accuracy Checkers
The people who are selected to [check the translation for accuracy](../../checking/accuracy-check/01.md) should be people who already know the Bible well in the source language. They should be able to read well in the source language. They will be comparing the translation to the source Bible, to make sure that the translation communicates everything that is in the source Bible. They should be people who are interested in the translation work and who have time to doagood job of checking. It is best for accuracy checkers to include members of the different church groups who speak the target language and who will use the translation.
ဘာသာပြန်ဆိုမှုရဲ့ မှန်ကန်မှုများကို စစ်ဆေးရန်အတွက်ရွေးချယ်ထားသူများသည် သမ္မာကျမ်းစာကို မူရင်းဘာသာစကားဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းတို့သည် မူရင်းဘာသာရပ်ကို ကောင်းမွန်စွာဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသူ ဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုထားမှုကို မူရင်းစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာများဖြင့်နှိုင်းယှဥ်ပြီး မူလသမ္မာကျမ်းစာမှ ပေးလိုသော ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ နှိုင်းယှဥ်ပေလိမ့်မည်။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဘာသာပြန်ခြင်းအပေါ်စိတ်၀င်စားမှုရှိ သူများဖြစ်သင့်ပြီး စစ်ဆေးမှုကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူများလည် ဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မတူညီသော ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့များတွင် ပါ၀င်သူ၊ ပြန်ဆိုမည့်ဘာသာစကားကို ပြောဆိုနိုင်ပြီး ဘာသာပြန်ကို အသုံးပြုသူတို့ ဖြစ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပေသည်။
#### အကြုံး၀င်မှုအား စစ်ဆေးသူများ
အကြုံး၀င်မှုအား စစ်ဆေးသူများသည် ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားနယ်ပယ်၌ ကျယ်ပြန့်စွာလေးစားမှု ခံယူရရှိထားသူများ ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုမှုသည် ဘုရားကျောင်းများ၏ လက်ခံမှုရရှိရန်နှင့် အသုံးပြုကြရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် အလွန်အလုပ်များသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြရာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ၎င်းတို့ ယုံကြည်သူများကို စစ်ဆေးရန် ခန့်အပ်ရွေးချယ်ထားမည်ဖြစ်နိုင်သည်။ မတူညီသော စာအုပ်များနှင့် စာပိုဒ်များကို မတူညီသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်ရူရန် ပို့ဆောင်ခြင်းသည် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များအား အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေနိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
These people must have experience (or aptitude) with technology and computers for all things pertaining to file management, as well as training and use of software and hardware.
နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးသူများအနေဖြင့် နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာအသုံးချမှုများကို ကျွမ်းကျင်မှုရှိရန် လိုအပ်ပြီး ဖိုင်(လ်) စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ (Software) နှင့် (Hardware) အသုံးပြုမှုနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်မှုများစသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများပါရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။
#### Project Management
These people must have skills in organization, planning, and management of the translation team’s time, effort and workload.
၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၊ အစီအစဥ်ပြုလုပ်မှု နှင့် ဘာသာပြန်အဖွဲ့၏ အချိန်၊ အားစိုက်ထုတ်မှုနှင့် အလုပ်တာဝန်များခွဲဝေမှု စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သည် အရည်းအချင်းများရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
#### Process Management
These people have skills in teaching, leading, and coaching in workshops, as well as ongoing assessment and improvement of team methodology and application of translation principles.
၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အား နည်းပေးလမ်းပြမှု လုပ်ဆောင်ဆဲလုပ်ငန်းစဥ်များနှင့် အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းများ တိုးမြှင့် (တိုးတက်) အောင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဘာသာပြန်နည်းလမ်းများအား ကျင့်ယူသုံးစွဲမူတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် အရည်အသွေးများရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
#### Mapping Skills to Roles
#### လုပ်ငန်းတာ၀န်များအား ခွဲဝေလမ်းညွှန်သတ်မှတ်ခြင်း အရည်အသွေးများ
The combined skills that are needed inaChurch-Centric Bible Translation team can
be configured intoateam of many different roles. The best composition of any
given team cannot be prescribed in advance. It might even change over time, but the team must account for all the essential skills. We accomplish this as follows:
ဘုရားကျောင်းအခြေပြု ကျမ်းဘာသာပြန်အဖွဲ့တစ်ခုတွင် လိုအပ်တဲ့အရည်သွေးများသည် မတူညီသော လုပ်ငန်းတာ၀န်များ (အခန်းကဏ္ဍများ) ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ရန်လိုအပ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား သတ်မှတ်ရာတွင် တိကျသော စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုသည်မှာ ရှိရန်ခဲယဥ်းပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြောင်းလဲနေတတ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းအနေနှင့် လိုအပ်လာနိုင်ခြေရှိသော အရည်အသွေးအားလုံးကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၎င်းအရည်အသွေးများကို အောက်ပါအချက်များအားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပါသည်။
1. We work with the leaders of the church networks to ensure that they understand the skills and functions needed on their translation team, as described in unfoldingWord® Translation Academy.
1. ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်ဘုရားကျောင်းခေါင်းဆောင်ကွန်ယက်များကို (Unfolding word ® Translation Academy) တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဘာသာပြန်အဖွဲ့တွင် လိုအပ်သော အရည်အသွေးများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ပုံသဏ္ဍာန်များကို နားလည် သိရှိစေရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ (အဖွဲ့အစည်း၀င်များ) တွင်ရှိသည့် အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ အဖွဲ့တည်ဆောက် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ကူညီပေးခြင်း။
2. We help them to identify an initial team composition based on the skills and contextual reality of their team (e.g., size of the team, theological ability, translation experience, language skill, geographic distribution, relationship dynamics, etc.). Their team may be small, with several skills being provided by the same person. Or the team may be large (in some cases as many as 25 full-time translators and hundreds of volunteers), with many people providing the same skill in an overlapping and intentionally redundant manner. Regardless of the structure and size of the team that is needed inagiven context, the combined roles on any team must provide the combination of skills needed to achieve excellence in Bible translation.
2. (ဥပမာ - အဖွဲ့အစည်း၏အရွယ်အစား၊ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံ၊ ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သတ်သော အရည်အသွေး (ကျွမ်းကျင်မှု)၊ ပထ၀ီဒေသအလိုက် ဖြန့်၀ေခြင်း၊ ကူလူးဆက်သွယ်မှု ပုံသဏ္ဍာန်များ\__\__\__\__စသည်)။၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် သေးငယ်ပြီး တစ်ဦီးတစ်ယောက်တည်းက လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာ တာ၀န်ယူထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် တူညီသော အရည်အသွေးရှိသည့်သူများစွာနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမလိုအပ်ဘဲ လူစုများအောင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (အချို့သော အဖွဲ့မှာ ၂၅ ယောက်မျှသော အချိန်ပြည့်ဘာသာပြန်များနှင့် ရာချီသော စေတနာ၀န်းထမ်းများ ထားရှိသည်ကို တွေ့ရတတ် သည်)။ အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ အရွယ်အစားက မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ပေါင်းစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ရှိသင့်သည့် အရည်အသွေးမှာ သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကျမ်းစာဘာသာ ပြန်ဆိုမှု တစ်ခုဖြစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သောအရည်အသွေးများကို ပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်း ရှိမှုပင်ဖြစ်ပေသည်။
3. The team begins working together on an initial translation project (we recommend Open Bible Stories) and observes the effectiveness of their team’s configuration. As needed, adjustments to the team structure are made to improve efficiency, and training is provided to increase skill and effectiveness.
3. ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း၏အစတွင် အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို စတင်ရပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်း၏ အသုံး၀င်မှုပုံစံကို သိရှိနားလည်အောင် လုပ်ဆောင်သည်။ လိုအပ်ပါက အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အသုံး၀င်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် သင်ကြားမှုများသည်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။